Posted by Rob Y. ngo-May 6, 2014 · Shiya amazwana
Uma ukuthenga imoto eyisekeni ngaphezu ukwenza olunye uketshezi ukuthi siye basikisela ukuthi uhlole, nani kudingeka uhlole izimoto amabhuleki. Ukunqanda imoto kukhona into eyodwa zenzelwe ukugqoka out. Kuyinto ukungqubuzana phakathi Rotor kanye pads ukuthi ukuyimisa uma isicelo amabhuleki. Uma kokubili pads kanye akwazi ukugcina benziwa aphume ngensimbi lukhuni ubungeke asithole amandla kokuphumula. Kulesi sihloko sizobe ukumboza kokuhlola amabhuleki front izimoto namaloli.
On izimoto newer kanye nezinsimbi evulekile kungaba kahle kulula ukuthola shazi isimo amabhuleki. The amabhuleki front kukhona kuphi phakathi 60 futhi 70 amaphesenti kwamandla akho kokuma. Uma uqala ukuhamba kuze imoto ungabheka phambili ukubopha rotors ngokubheka ngokusebenzisa usebe futhi ehlola isimo rotors. Qinisekisa ukuthi imoto iye hhayi qhutshwa, kungenjalo bayokudla kube hot uthinte. Sethemba nezinsimbi avulekele ngokwanele ukuze ukwazi ukuthola shazi omuhle at kubo. Zama futhi ubone uma uqaphela lamagquma yonkana Rotor. Uma ungakwazi unamathela umunwe wakho ngokusebenzisa le rim ungakwazi futhi uzizwe Rotor ukubona ukuthi kukhona lamagquma yonkana Rotor. Uma kukhona, kukhona ithuba elihle ukuthi imoto uzodinga umsebenzi wazihlephula ngokushesha. Uma Rotor limnandi futhi smooth ke ukuthi kuyinkomba ekahle ukuthi amabhuleki isesimweni esihle.
Uyofuna ukuvula hood futhi uhlole uketshezi wazihlephula. Kukhona kungaba inkomba ezingeni ngaphandle kwe-ibhokisana lokugcina itiye noma ikhofi wazihlephula uketshezi, noma kukhona induku cwilisa phezu cap yamathebhu. Qinisekisa ukuthi uketshezi ngaphakathi imikhawulo esibekiwe. Uma kuba ongaphakeme kungaba enye inkomba ukuthi imoto edinga umsebenzi wazihlephula. Njengoba pads bagqoke, the pistons in the calipers banwebele ekujuleni komthala edinga ukusetshenziswa uketshezi more.
Manje qhubekela phambili uthole in the imoto Ukuvula ukuthungela on, kodwa ungaqali imoto. Mqaphele kuzo zonke izibani inkomba on the dash. Does the vehicle have an ABS light or brake light? ABS ukukhanya Anti-lock Brake System nangaphansi kwezimo amsistimu extreme isusa amsistimu amandla nezinye amasondo ukugcina imoto bewagcina a skid. Lokhu ukukhanya ngokuvamile yellow on the dash kanye “Brake” ukukhanya ngokuvamile red. Manje qala imoto qiniseka ukuthi lezi izibani ukuphuma. Uma benza cisha, ke konke ohlelweni brake kufanele okusebenzayo. Uma ukukhanya ABS noma Brake ukukhanya lihlala phezu, ke uhlelo brake edinga isevisi.
Olandelayo, ufuna ukuya phambili futhi ukushayela imoto. Utjhayela ukusebenzisa amabhuleki kanye Mqaphele ngokuqondene nalokho amasondo ayo enza. Ingabe imoto siqhubeke emgceni locondzile, noma ingabe ukudonsa eceleni noma enye. Imoto kufanele siqhubeke emgceni locondzile, uma ukudansela isiginci sakhe eceleni noma ezinye ke uhlangothi amabhuleki isebenza nzima ukwedlula ezinye futhi libonisa ukuthi inkonzo wazihlephula edingekayo. Nani ufuna ukulalela ngesikhathi kufakwa amabhuleki. Ingabe benza umsindo squealing noma umsindo ukugaya? Uma benza ziyanswininiza kuba inkomba ukuthi umsebenzi wazihlephula kungenxa. Manje izimoto abaningi anemisila yini ngokuthi “Squealers” phezu pads wazihlephula. It yakhelwe ukuze lapho pads ukugqoka phansi iphuzu elithile the “squealer” ethinta Rotor ukukwazisa imoto udinga pads kanye kusiza ukuvikela rotors. Uma uzwa ukugaya – kahle nakanjani kudingeka ukuya esitolo ukulungisa ukuze sibe amabhuleki wambuka.
On izimoto newer ukuthi ucabangela ukuthenga, ungakwazi futhi oda imoto umbiko umlando ukubona uma imoto iye inakekelwe nomthengisi futhi uma kukhombisa isikhathi isevisi. Nokho, imoto kungenzeka aye alondolozwa nomthengisi ukuze lemibhalo kungenzeka kungatholakali. Noma kunjalo, ngaphambi uthenga, wena ukubuza uma ungakwazi ukuthatha imoto umakhenikha wangakini ukuze ayohlolwa out ukukunika ucezu kancane more kwengqondo.
Lokhu post wadalwa omunye wabanikazi futhi inikeza it for the ukusetshenziswa futhi kuzuze kungcono abafundi. Thina asamukelanga isinxephezelo bakwamanye abaxhumana kule sayithi ekubhaleni le post.
Tags: ngibheka amabhuleki, imoto umbiko umlando